Author: Tetaur Felabar
Mooshinka kuma saabsana Imaaraatka oo kaliya, ee soomzaliya kale waxa uu xusayaa dowladdo kale oo la sheegay in ay iyaguna farogalin ku zoomaaliya arrimaha gudaha ee Soomaaliya, wuxuuna mooshinka ku baaqayaa in loola dhaqmo si la mid ah Imaaraatka. Dastuurka Qabyada ah wuxuu siinayaa dowlada federaalka in tilaabooyin maamul ay qaado markii dowlad goboleed ay dabacsan tahay ama ay u dhaqmeyso si lidi ku ah dastuurka.
Kadib markii lasoo xulay Xubnaha Baarlamaanka Ayeey waxay doorteen Gudoomiyaha Baarlamaanka ama Afhayeen, waxay markale duurteen Madaxweyne oo isgana sii xushay Raiisul wasaare, Sidaas ay dawladdu ku tahay Baarlamaani oo wax walba Dastuurkx ayaa soo go’aaminaya.
Qodobka aad-Muddada Xaafiiska Madaxweynaha iyo Madaxweyne-Ku-Xigeenka Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay haynayaan xafiiska ugu badnaan labo xili oo midkiiba uu yahay 5 sano. Waxaa xusid mudan in mooshinka ay hormuud ka yihiin xildhibaano horey dowladda ugu eedeeyey in ay Itoobiya ku wareejisay muwaadin Soomaaliyeed, arrintaas oo markii dambe loo saaray guddi soo baara.
Qodobka 99aad-Madaxweyne-Ku-Xigeenka Musharraxiinta jagada madaxweynuhu waaa in ay soo magacaabaan qofka ay u xusheen jagada madaxweyne ku-xigeenka kaasoo solmaaliya madaxweyne ku-xigeen haddii uu guuleysto musharraxa soo magacaabay, haynayana xilka madaxweyne-ku-xigeenka mudada uu madaxweynuhu hayo xilka madaxweynaha. Markii ugu dambeysay ee Puntland ay go’aan mid kaa la mid ah qaadatana waxa ay ahayd dii bishii Federaalja, kii, xilligaas oo uu khilaaf soo kala dhexgalay madaxweynihii hore, Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulka Puntland.
Marka waa in ay noola dhaqanto qaab dowladeed, ee aysan noola dhaqmin sida qabaa’il iska firirsan oo aan dowlad dhexe lahayn”, ayuu yiri xildhibaan Zakariye oo BBC-da la hadlay.
Qodobka aad-Dhaarta Madaxweynaha Inta uusan hawsha bilaabin Madaxweynaha Jamahuuriyaddu wuxuu marayaa dhaarta ku xusan sharciga, waxaana lagu hor dhaarinayaa xaflad ka dhacaysa fagaare dadweynuhu joogaanwaxaana dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamaada Dastuuriga. Soomaaliya Waxay leedahay Baasaboor Elektaroonik ah inkastoo kaydka macluumaadka ama Serverka kaydiya Macluumaadka uu yaalo Imaaraatka Carabta Wali Awood uma helin laanta Socdaalka in ay usoo wareejiso Soomaaliya.
Qodobka aad-Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha. Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay haynayaan xafiiska ugu badnaan labo xili oo midkiiba uu yahay 5 sano. Xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo ka mid ah kuwa mooshinka gudbiyay ayaa sheegay: Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa 1 Musharraxa Madaxweynenimada ama ku-Xigeenka Madaxweynaha waxaa soo jeedin karaa xisbiyada siyaasadeed ama wuxuu noqon karaa Musharrax madax-bannaan.
Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa. Warar kale oo dheeraad ah oo la xiriira qodobkan. Cutubka 3aad Xuquuqda Aas-aasiga ah.
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay Qoralka waa la heli karaa sida uu qabo Ruqasadda Commons ee hindisidda ee marka loo eego la midka ; waxaa soo hoos gali kara qodobo kale. Badmareenka Soomaalida Ciidanka Xoogga. Hase yeeshee waxa ay xaaladda cirka isku sii shareertay kadib markii madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf uu soomaaiya in dowladda federaalka ay diyaaradii uu la socday “ku xayirtay magaalada Hargaysa”.
Soomaaliya Waxay leedahay laba xarun ee warfaafineed dastuura ku hadla Afka Dawladda Radio Muqdisho ito Telefishinka Qaranka Soomaaliyeedwaxaa kaloo jira Saxaafad madax badaan oo badankood ku hadla Afka Beelahood.
Mid ka mid ah waa Somaliland oo gooni isu taagtay sheegatayna in ay tahay jamhuuriyad madax bannaan. Waxaanu doonaynaa in xiriirka la hagaajiyo”, ayuu yiri xildhibaan Zakariye.
Muxuu Khilaafka Khaliijka u gilgiley nidaamka federaalka Soomaaliya? – BBC News Somali
Qoraalka mooshinka ayaa lagu soo gabogabeeyay jumladdan “Mudane Guddoomiye iyo xildhibaanada sharafta leh, wax badan ayaan u dulqaadanay meel-ka dhacyada iyo gabood-falada dadka iyo dawladnimada Soomaaliyeed ay ku hayaan dawladaha shisheeyuhu, ayadoo maantay ay na hortaallo fursad aan wax uga qaban karno, waajibaadkeena qaran aan ku gudan karno, Alle iyo umadda hortooda”. Cutubka 8aad Baarlamaanka Federaalka. Cutubka kusaabsan dastuurada dowlad goboleedyada Cutubka 13 ee Dastuurka Qabyada ah wuxuu sharaxayaa in dowlad goboleedyadu ay sameeyaan dastuuro ay ayagu leeyihiin oo waafaqsan Dastuurka Federaalka iyo mabaadiida aasaasida.
Qodobka aad-Dhaarta Wasiirada Golaha Wasiirrada marka ay helaan kalsoonida Golaha Shacbiga waxay marayaan dhaarta ku xusan sharciga, waxaana ku hor dhaarinaya fadhi gaar ah ee Golaha Shacbiga Gudoomiyaha Maxkamada Dastuuriga. Qodobka 96aad-Doorashada Madaxweynaha iyo Madxweyne Ku- Xigeenka 1 Madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka waxaa si toos ah u doran doono dadweynaha. Hadaba, halkuu ku dhammaan doonaa khilaafka soo kala dhex galay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya?
Muuqaalka Akhri Itusi xogta Itusi taariikhda.
Golaha Wasiirrada marka ay helaan kalsoonida Golaha Shacbiga waxay marayaan dhaarta ku xusan sharciga, waxaana ku hor dhaarinaya fadhi gaar ah ee Golaha Shacbiga Gudoomiyaha Maxkamada Dastuuriga. Cutubka 16aad – Qodobbada Guud. Qodobka aad-Habka Iscasilaadda Madaxweynaha. Qodob kale oo Aqoon Guud ah. Isfaham darada mararka qaar dastuyrka kala dhexgasha dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waa mid aad u qoto dheer oo soo jiitamayay muddo dheer.
Haddii dasfuurka uu soo jeediyo xisbi, magacaabistiisu waa in ay taageeraan ugu yaraan hal laan oo ka mid laamaha xisbiga ee ku yaalla dawlad-goboleed kasta. Qaybaha kale Xisbiyada siyaasadda Xiriirka Dibadda Baasaboor.
Madaxweyne ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha inta dacwaddiisu ka dhammaaanayso. Qodobka aad-Awooda Madaxweynaha Awoodaha madaxweynaha waa: Murankaas oo markii dambe xal laga gaaray.
Soomaaliya malahan Ciidan habaysan kaas oo awooda hanashada amaanka Dalka iyo Xuduudihiisa, waloow ay dhisanyihiin ciidan gaaraya ugu yaraan 50, hadana waa ciidamo beeleedyo la isu-keenay. Ma ogin in dowladdiisu ku ogtahay iyo inkale.
Guddiga Xorta ah ee Dastuurka Federaaliga wuxuu bixinayaa saddex ikhtiyaar oo la kala dooran karo:. Nambarada qodobada hoose waxay la socodaan numbarada qodobada baarlamentaariga. Soomaaliya Malahan manhaj mideeysan ee wax barasho, waxaa ka jira Dugsiyo iyo jaamacado si xoomaaliya ah loo leeyahay.